Umshini wephrinta we-Textile we-2880d we-T-Shirt China Manufacturer
Incazelo:Umshini wephrinta weThetile we-T-Shirt,I-A3 Dtg Custom Printing,Umshini wokunyathelisa we-Textile we-Textile Mini
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > Iphrinti yeThetile > Umshini wephrinta we-Textile we-2880d we-T-Shirt
Lokhu Umshini wokunyathelisa we-Textile we-Textile Mini uqukethe izinguqulo ezimbili. Eyodwa ivamile futhi eyodwa ide, nge-cap, ingavula futhi igcine ngokuzikhethela kwakho. Sisebenzisa inkinobho yekhwalithi ephakeme futhi umphumela wokuphrinta uphelele. Sinebuchwepheshe obusha ne-infrared ray ukulawula ubude bokuphrinta. T he izithombe umbala, futhi kukhona manzi, elangeni, ukugqoka ukumelana naso futhi kwenze awusoze wabuna. Iza ne-CMYKW, ungasebenzisa lo Mshini wephrinta weThembi nge-T-Shirt iphrinta ukuze uprinte yonke imikhiqizo ye-textile. Kungaphrinta izithombe eziphezulu ezichaza izinto ezinhlobonhlobo zempahla, njenge-t- shirt, amabhulukwe, izicathulo, c lothing, hat., isilikhi, isikhwama sokuthenga, hoodies nokunye.
Ukusetshenziswa kwe- A3 Dtg Printing Custom :
Umshini wephrinta weThetile we-T-Shirt I-A3 Dtg Custom Printing Umshini wokunyathelisa we-Textile we-Textile Mini Umshini wephrinta we-T-Shirt Umshini wephrinta weThetile Umshini wephrinta we-T-shirt Umshini wephrinta weTile Umshini wokuprinta we-A3 T-Shirt